चीन घुटने भारोत्तोलन र फिटनेस कारखाना र आपूर्तिकर्ता को लागी आस्तीन समर्थन AoFeiTe
घुटने भारोत्तोलन र फिटनेस को लागी आस्तीन समर्थन
सुविधा:न्यानो राख्नुहोस्, स्थिर
सामग्री:नायलॉन, नियोप्रिन, नियोप्रीन, नायलॉन, बेन्ड्याबल स्टील प्लेट
उत्पाद नाम:घुँडी ब्रेस समर्थन खेल
प्रकार:घुँडा टेक्ने घुटने क्याप घुटने रक्षक
प्याकेजि::१ टुक्रा / pp झोला
आपूर्ति क्षमता:50000pieces / महिना
घुँडा टेवा आस्तीनअनुकूलित थोक कम्प्रेसन घुडा आस्तीन समर्थन। कोघुँडी ब्रेसटखुको मांसपेशीहरु को क्रम्प र चोट को कारण को रोकथाम वा पीडा कम गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। लोचदार सामग्रीले शरीरको तापक्रम कायम राख्न, रक्त परिसंचरणको गति बढाउन, र पुनःस्थापनाको सुविधा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ। भारोत्तोलनको लागि घुँडा टेवा सुविधा: चोटपटकबाट बच्नुहोस्, घुडा सुरक्षा गर्नुहोस्। सास फेर्न सक्ने, उच्च लोचदार, सहज। पसिना अवशोषण, गैर-पर्ची। यो कपडा एक सुरुचिपूर्ण, प्रथम श्रेणी गुणवत्ता साटन रोसेट लेस कपडा, ग्रेसफुल रंग हो। रोसेट लेस कपडा: धेरै र colorsहरूमा उपलब्ध छन्, तपाईं र pick्ग उठ्नुहुन्छ। नरम र रोमान्टिक। यो ताजा फीता कपडा विवाह समारोह सजावट, परिधान, पर्दा, घर सजावट, नयाँ जन्म फोटो को लागी उपयुक्त छ। स्वास्थ्यको लागि घुँडा टेवासंकेत: Preoperative र postoperative घुडा फिक्सिंग। तपाईंको घुँडी कोष्ठकको लागि पुनर्वास। घुँडा ligament क्षति र फ्रैक्चर को लागी। घुँडाई फ्लेक्सन ठेक्का, नरम प्याटेला फ्रैक्चर बिच्छेदन को गम्भीर चोट। सबै खेलहरूको लागि सूट घुँडा टेक्न समर्थन गर्दछ जस्तै दौड, सवारी, चढाई, बास्केटबल, फुटबल र यस्तै।
हामी स्वास्थ्यसेवा र हड्डी रोग जस्ता उत्पादनहरूमा विशेषज्ञ छौं घुँडी ब्रेस समर्थन, कमर पछाडि कोष्ठक समर्थन, मुद्रा सुधारकर्ता, कलाई कोष्ठक समर्थन, कुहिनो कोष्ठक समर्थन, टखने काष्ठ समर्थन, काँध कोष्ठक समर्थन, घाँटी कोष्ठक समर्थनर यस्तै। साथै हाम्रो सुविधा सेवा मध्ये एक अनुकूलित अर्डर हो। हामी तपाईंको डिजाइन लोगो र रंग बक्सको साथ उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्छौं। हामी तपाईंसँग लामो समयको लागि काम गर्न अगाडि हेर्दै छौं!
आदर्श घुँडा समर्थन आस्तीन निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंसँग सिर्जनशील हुन मद्दतको लागि हामीसँग ठूलो मूल्यहरूमा विस्तृत चयन छ। भारोत्तोलनका लागि सबै घुँडा टेक्ने गुणवत्ताको ग्यारेन्टी छन्। हामी फिटनेसका लागि घुँडा टेक्ने चीनको मूल कारखाना हो। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
बास्केटबलका लागि कम्प्रेसन घुँडा स्लीभ
व्यावसायिक लोचिक खेल घुटने ब्रेस समर्थन ...
तातो बिक्री प्रोमोशनल उच्च गुणवत्ता घुँडा आस्तीन
कम्प्रेसन एन्टी स्किड घुँडा स्लीभ
बास्केटबल नियोप्रिन घुडा कोष्ठक प्याड समर्थन टिका छ